မန္တလေး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း
လျှစ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ
ညောင်ဦးခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ််ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ
မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ
မီတာ (၄)မျိုးစနစ်၏ အချက်အလက်များ
မြင်းခြံခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ
ရမည်းသင်းခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ
အိမ်သုံးမီတာ ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ
15.10.2018 ရက်နေ့အထိ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MESC) အတွင်းဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် သုံးခု ၊ သေဆုံးသူ သုံးဦး ရှိကြောင်းရေးသားခဲ့ပြီး 16.10.2018 ရက်နေ့တွင် Post တင်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖြစ်စဉ် များကို သိရှိပြီး သတိပြု ဂရုစိုက်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးဆရာမင်းလူ၏ နှလုံးသား ၃၈၀/၅၄ အပါအဝင် Post Humour ဝတ္ထုတိုများစာအုပ်မှ “မော်ဒန်စွမ်းအင်” ဝတ္ထုတိုအား ဖော်ပြခြင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
ရမည်းသင်းခရိုင် ရမည်းသင်းမြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အားသုံးစွဲသော ပြည်သူများသို့(၂၀.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၂၁.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် နံနက်(၀၉:၀၀ မှ ညနေ (၁၆:၀၀) နာရီအထိ ဓာတ်အားပိတ်လုပ်ငန်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင် ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်း ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို ကြိုတင်အသိပေးပန်ကြားခြင်း
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဓာတ်အားလိုင်းများ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေး ၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့် အများပြည်သူများ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် (၂၀.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် ဓာတ်အားလိုင်း
မိတ္ထီလာခရိုင်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးတွင် စက်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စက်မှုဇုံကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကိစ္စ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံရှိ 33/11kV,(5+5)MVA စက်မှုဇုံပိုင် ဓာတ်အားခွဲရုံမှ အမှတ်(၁) 5MVA ထရန်စဖော်မာ လောင်ကျွမ်းမှု့နှင့် ပတ်သက်၍
၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်
“ဘာကိုပြောလို့ - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရ”
	၁.၁၀.၂၀၁၈ရက်နေ့ ၊ မြစ်သားမြို့ ၊ စံပြသူဌေးရပ်ကွက်မှာ မောင်ချစ်သူအောင်၊ အသက်၆နှစ်ဟာ နေအိမ်အောက်က မြေကြီးပေါ်မှာ ဖျာခင်းအိပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပူလို့ ပန်ကာဖွင့်ရန် ယာယီသွယ်တန်းထားတဲ့ မီးပလပ်ခုံကို လက်ယာဘက်လက်နဲ့ကိုင်မိရာမှ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ရမည်းသင်းခရိုင် ရမည်းသင်းမြို့နယ်အတွင်းဓာတ်အားပိတ်လုပ်ငန်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်
(၁၃.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၁၄.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် နံနက်(၀၉:၀၀ မှ ညနေ (၁၆:၀၀) နာရီအထိ ဓာတ်အားပိတ်လုပ်ငန်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင် ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအအစဉ်
ကျောက်ဆည် အောက်တိုဘာ လ ၁၂ မြစ်သားမြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးထားသော ၁၁ ကေဗွီ မြို့တွင်းဖီဒါအား ဖီဒါအသစ်ခွဲထုတ်ရန် ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ (၁၃.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များ၊ကျေးရွာများ(၀၈:၀၀)နာရီမှ(၁၅:၀၀)နာရီထိ ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဓာတ်အားလိုင်းများ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေး ၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့် အများပြည်သူများ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် (၁၃.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့ စနေနေ့တွင်
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင် ၃၃/၁၁ ကေဗွီ (၅) အမ်ဗွီအေ ဓာတ်အားခွဲရုံအသစ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း
မြင်းခြံခရိုင် ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ ပြင်စည်ကျေးရွာအနီးတွင် ၃၃/၁၁ ကေဗွီ (၅) အမ်ဗွီအေ ဓာတ်အားခွဲရုံအသစ် အား (၉.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့၌ ဓာတ်အားစတင် လက်ခံကာ အနီးပတ်၀န်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများအား ဓာတ်အားစတင်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်တွင် 33/11kV, 5MVA ဓာတ်အားခွဲရုံ ဓာတ်အားလွှတ်ပြီးစီးခြင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ ညောင်ရမ်းကျေးရွာအနီးတွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် 33/11kV, 5MVA ဓာတ်အားခွဲရုံအား
မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွင် 33/11kV, 5MVA ဓာတ်အားခွဲရုံ ဓာတ်အားလွှတ်ပြီးစီးခြင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မိတ္ထီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်းကားလမ်းဘေး ဖလန်ကျင်းကျေးရွာအနီးတွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် 33/11kV, 5MVA ဓာတ်အားခွဲရုံအား
မြင်းခြံခရိုင် ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ ၀က်လူးကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်း၌ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း
မြင်းခြံခရိုင် ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ ၀က်လူးကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်း၌ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲအား ဒု-ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ နှင့် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ တို့မှ ဦးစီး၍ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဓာတ်အားလိုင်းများ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေး၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့် အများပြည်သူများ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် (၆.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ စနေနေ့နှင့် (၇.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင် ဓာတ်အားလိုင်းထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်
မြင်းခြံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များအနေဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျူးကျော်မဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်များ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
မြင်းခြံခရိုင်အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးများတွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ လျှောက်ထားရာ၌ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ကျူးကျော်မဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မီးလင်းရေးကော်မတီများသို့လည်း ရှင်းလင်းပြောပြလျက်ရှိပါသည်။
မိတ္ထီလာခရိုင်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား “လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးစားမှုမပြုလုပ်ရန်ကိစ္စ” နှင့် ပတ်သက်သည့် ညွှန်ကြားချက်အား ရှင်းလင်
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ မိတ္ထီလာခရိုင် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာဦးနေဦးသည် (၅.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင်
ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်တွင်(၆.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၇.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့တို့တွင် ဓာတ်အားပိတ်လုပ်ငန်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်
တိုင်၊ လက်တန်း၊ကြိုးများ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် တိုင်ထူခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်
ကျောက်ဆည် အောက်တိုဘာ လ ၅ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးထားသော ၃၃ ကေဗွီ ကြက်မင်းတွန်ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ ၁၁ကေဗွီရွှေသိမ်တော်ဖီဒါနှင့် ဟံမြင့်မိုရ် ဖီဒါတို့၏ အမှတ်(၁)ထရန်စဖော်မာစီတီ လဲလှယ်မည်ဖြစ်ပါ၍ (၇.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မြို့တောင်ဘက်ခြမ်း ကျေးရွာများ၊ ရုံးပေါင်းစုံ၊ ကြက်မင်းတွန်၊ သစ်တောရုံး၊ ထွန်စက်စခန်း၊ ရွှေသိမ်တော်ဘုရားနှင့် မြောက်ဘက်ခြမ်း ကျေးရွာများတွင် (၀၉:၀၀)နာရီမှ (၁၅:၀၀)
ကျောက်ဆည် အောက်တိုဘာ လ ၅ မြစ်သားမြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးထားသော ၁၁ ကေဗွီ မြို့တွင်းဖီဒါအား ဖီဒါအသစ်ခွဲထုတ်ရန် ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ (၆.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များ၊ ကျေးရွာများ (၀၈:၀၀)နာရီမှ (၁၃:၀၀)နာရီထိ ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဓာတ်လိုက်မှု အန္တရာယ် ကင်းဝေးရန်
(က) အိမ်သုံးလျှစ်စစ်ပစ္စည်းများအား ရေစိုလက်၊ ရေစိုနေသော ခန္တာကိုယ်၊ ရေစိုနေသော အဝတ်အစားဝတ်လျက် ကိုင်တွင်ခြင်းမပြုရပါ။
(ခ) ဓာတ်လိုက်နေသူကို မဆွဲပါနှင့်၊ ဓာတ်မလိုက်နိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြင့် တွန်းထုတ်ခြင်း ဖယ်ရှားခြင်း ပြုလုပ်ရပါမည်။ (ဥပမာ - ခြောက်သွေ့သော ဝါးလုံး၊ သစ်သားချောင်း)
(ဂ) ရုံးခန်း၊ စျေးဆိုင်များမှ ပြန်ချိန်များ၊ အိမ်ပိတ်ပြီး အပြင်သွားချိန်များတွင် မီးခလုတ်များနှင့် မိန်းခလုတ်များကို ပိတ်ခဲ့ရန် မမေ့ပါနဲ့။
(ဃ) လျှစ်စစ်အန္တရာယ်တွေ့ရှိပါက အများသူငါ အန္တရာယ်ကင်းစေရေးအတွက် နီးစပ်ရာလျှစ်စစ်ရုံး (သို့မဟုတ်) လျှစ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူသို့ သတင်းပို့ပေးပါ။
Please fill address in System
Support Mobile No.
Copyright © Mandalay Electricity Support Coporation 2020. All Rights Reserved